Dr. Tint Swe's Writings: May 2020
Hepatitis C စီပိုးသည် ငပိုးမဟုတ်
cပိုးရှိနေတဲ့သူနဲ့ တအိမ်ထဲနေရင် အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်လားရှင့် ကျမသမီးလေးက ၇လ ပဲရှိသေးလို့ စိတ်ပူလို့ပါဆရာ
How to live with Hepatitis C positive person စီပိုးရှိသူနဲ့ အတူနေရသူတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/hepatitis-c-prevention.html
C ပိုးလို့ရိုက်သင့်တယ်။ စီပိုးလို့ရေးရတာ ပိုမလွယ်ဘူးလား။ လူတိုင်းနီးပါးက အဲလိုပဲရိုက်ကြတယ်။ နားလည်ရ ခက်တယ် ငပိုး ရေးတာလိုလို။
စာရိုက်တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ မြန်မာစာလုံးကြား တကွက်ခြာသင့်တယ်။ ဂဏန်းနဲ့စာလည်း တကွက်ခြာသင့်တယ်။ နားလည်ကရခက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာရေးနေရင်း အသက်ကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ရိုက်ကြတာ ၈၀% လောက်ရှိတယ်။ ပိုလွယ်လို့လား။
တချက် တချိန် တရုပ်
France ပြင်သစ်ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး တချတ်လို့ရေးရတာလားလို့ မေးတယ်။ ကျေးဇူး။
ကင်းဝန်မင်းကြီးရေးတဲ့ လန်ဒန်မြို့သွား နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာတမ်းထဲက စာမျက်နှာ ၄၁၅ ကို ပုံရိုက်တာတာမှာ နံနက် တချတ်ထိုးအချိန်လို့ ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ စာအုပ်ကို ပြန်စစ်ကြည့်တယ်။
စာမျက်နှာ ၄၁၆ မှာ ၂ ချက်တီးကျော်လို့ရိုက်ထားတယ်။ စာမျက်နှာ ၄၂၁ မှာလည်း ၄ ချက်တီးအချိန်လို့ ရိုက်ထားတယ်။ အဲတာကြောင့် ခဲစာလုံးစီတဲ့ အမှားဖြစ်နိုင်တယ်။ တချက်လို့ရေးလိုတာ ဖြစ်ပါမယ်။
စာမျက်နှာ ၄၂၁ မှာပဲ ငါးနာရီတချိန်လို့ရေးတယ်။ တချိန်ကို တချိန်လို့သာရေးပါတယ်။
French ကို မြန်မာတွေက ဘာကြောင့် ပြင်သစ်လို့ ခေါ်ရတာလဲဆရာ
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရစ်မြို့။
ကိုကိုမောင်ရေးခဲ့တာ ပါရီတွင်သောင်တင်ခဲ့စဉ်ကလို့ ရေးတယ်။ မှတ်မိသလောက် အဲတာထဲမှာ ပြင်သစ်လို့ ရေးမယ် ထင်တယ်။
ကင်းဝန်မင်းကြီးရေးတဲ့ လန်ဒန်မြို့သွား နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာတမ်းမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရစ်မြို့လို့ရေးတယ်။ သူက အဲဒီနိုင်ငံကို အစောဆုံးရောက်ခဲ့သူလို့ ယူဆရတယ်။ သေချာတာတော့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဒိထက် မသိသေးပါ။ ဆောရီး။
ကင်းဝန်မင်းကြီးက နံနက်တချက်ထိုးအချိန်လို့ ရေးပါတယ်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးထက် မြန်မာစာတော်သူတွေကတော့ တချက်ကို တချက်လို့ မရေးကြပါ။
၁။ ပြင်သစ်က မွန်တွေရေးနဲ့နာမည်ပါ Francis ကို မွန်တွေက ပြင်သေတ် /pran sis/ လို့ခေါ်ပါတယ် အင်းဝ အနှစ်လေးဆယ်တိုက်ပွဲထဲက ထိတွေခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲနာမည်ပါ ပြင်သေတ်ကို ဗမာသံနဲ့ဖတ်ပြီး ပြင်သေတ် အသံထွက်တာပါ သေတ္တာ လို သေတ် လို့ဖတ်ခဲ့ပေမယ့် အသံတူ သစ် နဲ့အစားထိုးရေးသားပြိး အခုထိ ပြင်သစ်ဖြစ်နေတာပါ စကားလုံးပြောင်းလဲမှုက ပန်းဆယ်မျိုးထဲက ပန်းပဲမြို့နာမည်ထဲက ဖျာပုံ တို့နဲ့ ပုံစံဆင်ပါတယ်
၂။ မိုးကုတ်ကျောက် လုံးချောသွေးပြီးသားတွေကိုလည်း ပါရစ်လို့ပဲ ခေါ်ကြပါတယ်ဆရာ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရစ်မြို့ရဲ့ဈေးကွက်မှာ လူကြိုက်များလို့ပါ။ ဖျာပုံက ဖျာပုင်ကို ဗမာလိုဖတ်ပြိး ပုင် အစား ပုံ ပြောင်းလိုက်တာ ပန်းဆယ်မျိုးထဲက ပန်းပဲက မူရင်းပါဠိစကားလုံး ပညာမှ ဉာ ဖြုတ် ပဉ် (ပန် /ပွန်း/ နဲ့အသံတူ) ကနေ မွန်စကားလုံး ပအေက်သဆင့်နောက်ပစ် နဲ့ရေးတဲ့ /ပစူးဝ်/ ကို ဗမာသံနဲ့ဖတ်ပြိး အသံထွက်လို့မရတဲ့ သဆင့်ကို ဖြုတ်ပြိး ပန်းပဲ ဖြစ်နေတာပါ အခြားပန်းတွေဖြစ်ပြိး ဗမာလို အဓိပ္ပါယ်လှယ်လို့မရတဲ့ ပန်းတမော့ (ကော်က္ပညာသို့ ကော်က္ဆစ္ပညာ) ပန်းတော့(စုလစ္မြန࿿းချြန࿿း အလွဆင္ပညာ) နဲ့ ပန်းတည်း (ကြေးပညာ သို့ ကြေးသြန࿿းပညာ) (တ္မံ= ကော်က࿿, ဍအ်= ဖောင࿿းကြ, တေ=ကြေး) တွေကျတော့ အသံကနေ လှယ်ထားတာပါ
အဆွယ်အပွါး အစွယ်အပွါး ဘယ်တခုက အမှန်ပါလဲ ဆရာ။
အစွယ်ကိုလိုသူ မိဖုရား၊ အသွားစေခိုင်းသူ မင်းဧကရာဇ်၊ (ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း၊ ဦးပုည)
ဟိုတနှစ်က စည်ပင်သာယာရွေးကောက်ပွဲပို့စ်တွေဖတ်ရတယ်။ မဲစွယ်တဲ့ပုံကြည့်ပါအုံး ဘယ်လောက် ရိုးစင်းလည်းဆိုတာ တဲ့။ (အမည် မထည့်တော့ပါ။ အားနာလို့)
မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျား အတိုင်ပင်ခံရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ မုတ်သုန်လို့ သုံးထားပြီး အဓိပ္ပာယ်လည်း ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာ့အဘိဓာန်ထဲမှာတော့ မုတ်သုံလို့ သုံးထားပြီး အဓိပ္ပာယ် တမျိုးဖွင့်ဆိုပြန်ပါတယ်။ မည်သည့် အသုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ မှန်(လောက်)ပါလည်းခင်ဗျာ
မနေ့တနေ့ကလည်း တယောက်က မေးသေးတယ်။ ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်းမှာ မုတ်သုန်လေလို့ပါတယ်။ စကားမူရင်းက အာရပ် mausim ကနေလာပါသတဲ့။ အဲတာမှာတော့ ရာသီဥတုလို့ ဆိုလိုတယ်။
The word “monsoon” comes from the Arabic word mausim, meaning season. The word “monsoon” comes from the Arabic word mausim, meaning season. Basically, it describesaseasonal wind shift overaregion that is usually accompanied byadramatic increase in precipitation.
ရေဒီိယိုတခုက ဗျူးတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ၅ လလောက်လိုတော့တာ ခပ်အေးအေးဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲတဲ့။ အမေရိကန်အီလက်ရှင်ကို မေးတာမဟုတ်။
ကပ်ရောဂါကြောင့်က နည်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက ကောက်ရိုးမီးဆန်တယ်။ သေချာနေတာအတွက် မပူပန်ကြာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
နိုင်မဲ့ပါတီက နိုင်မှာပဲ။ လက်ရှိလူတွေကို အားမရတိုင်း တခြားလိုက်ရှာနေကြတာကတော့ နေ့တိုင်း။ တခြား ဆိုတာတွေကလည်း ထူးမခြားနားတွေ။ စားခဲ့ဝါးခဲ့ကြသူတွေက စိတ်ကောင်းဝင်ပြီလို့ ထင်မှတ်သူ မရှိ။
၁၉၉၀ ကတည်းက တိုင်းရင်းသားနေရာတွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက အနိုင်ရတာများခဲ့။ အခုလည်း သိပ်ထူးစရာမမြင်။
အစိုးရအပေါ်မူမတည်။ လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေအပေါ်သာ မူတည်တယ်။ မက်နေခဲ့တာကြာပြီး ဖြစ်စေချင်ကြတဲ့ အိပ်မက်ကောင်း။ ဆက်မက်ကြတာပေါ့။
ခက်ဦးမယ်။ ကန့်လန့်တိုက်နေသူတွေက အတည့်မလျှောက်သေးသ၍ ခက်မယ်။ တခုတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ လက်ရှိ ဗခမက ခြေလှမ်းပြင်နေပြီ။ ဘယ်ဆီလည်း ပြောမရသေး။ တခုတခုတော့ တခုခုပဲ။ ခက်တာက သူ့မှာ ထူးချွန် အားကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွမ်းရည် အခုထိ မမြင်။
ခိုင်မာပြည့်ဝမှုရှိတဲ့ အတိုက်အခံ ရှိသင့်ပါသလား။ ရှိလာမလား။
မရှိသေး။ မထင်ပါ။ ရှိစေချင်တယ်။ အခုကစပြီး မက်သင့်ကြတဲ့ အိပ်မက်။
ဆရာရေ တစ်ယေက်လို့ မရေးရဘူး တယောက်လို့ ရေးရတယ်ဆိုတော့ နှစ်ယောက်လို့ မရေးရဘူးလား၊ နှယောက်လား။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘယ်သောအခါမကမှ တပြေးညီ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဆင်းရဲကြသည်။ ချမ်းသာကြသည်။ စာတတ်ကြသည်။ စာမတတ်ကြပါ။ ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာ နန်းတော်ထဲမှာ ခစားရသူတွေ၊ ကျေးရွာဇနပုဒ် နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ နေရသူတွေ မတူခဲ့ပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၄ နှစ်ကြာ သည်အတိုင်းသာ။ အဲတာနဲ့ ဗခက နေဝင်းအာဏာသိမ်းတော့ ဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်လာတယ်။ အားလုံးတပြေးညီစေရမယ်။ လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်တယ်။ ပါတီဝင်နဲ့ ပါတီမဝင်တော့ မတူ။ တင်းပြည့်နဲ့ အရန်မတူ။
စာရေးနေကြတာ တယောက်တမျိုး။ တပြေးညီစေရမယ်လို့ လမ်းညွှန်တယ်။ မူကွဲ မရှိစေရ။ သတ်ပုံကျမ်းသစ် ထုတ်စေ။ အပြီးမသတ်လိုက်ပါ။ ၂၅ နှစ် ကြာတော့ အယ်လ်ဒီစီ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တနှစ်ကြာတော့ ပြိုကွဲရော။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ကို ရယ်စရာ ပြောကြတယ်။ လက်ငါးချောင်းကို ညီစေအောင် ရှည်နေတာတွေ ဖြတ်တဲ့။
နောက်စစ်အစိုးရက ပိုစွမ်းတယ်။ သတ်ပုံကျမ်းသစ် ၁၉၉၁ မှာ ထုတ်နိုင်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်လိုမဟုတ်။ တတွေကို ဆွဲဆန့်ပေးပါတယ်။ လက်သုံးလုံးစာ စာအုပ်ကို ပြန်ထုတ်တော့ လက်လေးလုံးစာဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ တပြေးညီ သတ်ပုံကျမ်းကတော့ ကနေ့အထိ အသက်ဝင်တယ်။ ပဌမ မှားသတဲ့။ သမတ မှားသတဲ့။ ဗမာ မှားသတဲ့။
ကွန်မင့်တခု -မတစ်ဘဲနေမှာဆိုးလို့ တစ်ခိုင်းတာပါ တဲ့။
ဆိုး နဲ့ စိုး မှားနေတယ်။
ဆိုး နဲ့ စိုး၊ တက် နဲ့ တတ်၊ ပျောက် နဲ့ ပြောက်၊ အဲတာမျိုးက သတ်ပုံမတတ်လို့ မှားတာ။
ရ ကို က လို့ရေးတာ၊ P ထည့်ရေးတာ၊ မှု့ ရေးတာ၊ အဲလိုဟာက ထွင်တာ။
မှာ ကို မာ၊ တွေ ကို တေ၊ ပြီး ကို ပီး၊ ဖြစ် ကို ဖစ် ရေးတာတွေက မတတ်တာရော ထွင်ချင်တာရော ရောပြီး မှားကြတာ။
ဟိုအရင်က တ အမှန်တွေကို စသတ်ခိုင်းတာက မြန်မာစာအဖွဲ့အမှား။
မှားနည်းတွေ မတူပါ။ ဘယ်လိုမှားမှား၊ အမှားတိုင်းက အမှန်မဟုတ်ပါ။
ဒွေ ဒါ ဒယ် မာ
အာဖျံကွီးဆရာ ကလေးဒွေ ယူဆော့ဒါနေမယ် ကျနော်လည်းဖြစ်ဖူးဒယ် ဆရာ့ ပို့စ် တခုမာ အားနာဘါဒယ်ဆရာ
စာကို တမင်တကာဖျက်ရေးတာလို့ထင်တယ်။ ဒွေ၊ ဒါ၊ ဒယ်၊ မာ၊ ဘာဒယ်။
ဒွေ = ဒွေမေ ဘိက္ခဝေ (ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်)
ဒါ = ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ
မာ = မာကျူရီဂြိုဟ်၊ မာကျော၊ မာမာချာ၊ မာဆရိုက်လုံချည်၊ မာယာလှည့်ဖျား၊ မာရသွန်ပြေးပွဲ၊ မာရေကျောရေပြော၊ မာလကာသီး၊ မာလကျင်ပိတ်စ။
ကိုယ်လိုလူတွေဆီ ကြိုက်သလိုရေးကြတာ ပြောရန်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်ဆီကိုတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးသာ ရေးပါရန်။
ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် ၃၄ နှစ်ပါ ကလေးတယောက်ရှိပါတယ် ကျွန်မ သားအိမ်မှာ အကြိတ် (အကျိတ်) တွေ များကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ် သားအိမ် ထုပ် (ထုတ်) ရမယ်လို့ပြောပါတယ် မထုပ် (ထုတ်) ချင်ပေမယ်လဲ သားအိမ်မကောင်းဘူးဆိုတော့လဲ ထုပ် (ထုတ်) ရတော့မယ် သားအိမ်ထုပ် (ထုတ်) ပြီးရင် ဝလာတယ် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတော့ဘူး အလေးအပင်လဲမ မရတော့ဘူး အမျိုးမျိုးပြောနေကြလို့ပါ သားအိမ်ထုပ် (ထုတ်) ပြီးရင် ဘယ်လိုဖြစ်လဲ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ ဆရာ
သားအိမ်ထုတ်တာနဲ့တော့ ရာသီမလာ ကလေးမရတာသာဖြစ်မယ်။ မျိုးဥအိမ်တွေကျန်နေသေးရင် ဟော်မုန်း ဆက်ရနေမယ်။ အလေးအပင်ဆိုတာ ဗိုက်ခွဲလူနာတိုင်း အချိန်တခုထိသာ သတိထားရတယ်။
ဒေါက်တာခင်ဗျာ။ မင်းနားတထောင်၊ မင်းမြှောင်တသိန်း ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား အဓိပ္ပါယ် သိလိုပါတယ်။
မင်း၊ ဘုရင်၊ သမတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အစိုးရတိုင်းမှာ သူလျိုထားကြတယ်။ သူတို့က အစီရင်ခံကြရလို့ မင်းလုပ်သူက ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာနေပေမဲ့ သူ့တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ သိနိုင်တယ်။
မင်းအပါးမှာ ကပ်မြှောင်နေသူတွေကို ဆိုလိုတယ်။ အရည်အချင်းမရှိဘဲ ကပ်ဖါးရပ်ဖါးတွေဖြစ်ကြတယ်။ မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်တင်သူတွေကိုလည်း ခေါ်နိုင်တယ်။မင်း၊ ဘုရင်၊ သမတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းအနားမှာ အဲလိုလူတွေရှိတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေ့ခ်ျလည်းရှိတယ်။ ကြာပါပြီ။ မကြာခဏ ဒုက္ခပေးတယ်။ တမြန်နှစ်လောက်ကစပြီး ရိုးရိုး ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ကွန်မြူနတီစတင်းဒက်ကြောင့်ဆိုပြီး ယာဘီဘလော့တယ်။ ၇-၈ ခါလောက်ခံရတယ်။ အခု အဲလို အလုပ်မခံရတာ နည်းနည်းတော့ ကြာပြီ။
ပေ့ခ်ျက ဂွကျနေတယ်။ ဒုက္ခသစ်ပေးတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ စာမျက်နှာ May9at 11:40 AM နောက် အသစ်တင်မရတော့။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။
May 18 at 7:36 PM မှာတခါ Page ပြန်ရပြန်ပြီတဲ့။ ၃ ခုတင်လို့ရပြီး မရတော့ပြန်။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။
May 28 at 9:53 PM ပြန်ရပြန်ပြီတဲ့။ ၃ ခုတင်လို့ရပြီး မရတော့ပြန်။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ။
Page မှာ စာဖတ်သူ ပိုများသလားတော့ မသိ။ ဟိုအရင်က ပျက်ခဲ့တဲ့ Page မှာ စာအသစ်တိုင်တိုင်း ဖတ်တဲ့သူတွေ ထောင်ဂဏန်း သောင်းဂဏန်းရှိခဲ့တယ်။ ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့ မသိ။
Page မှာ အသစ်သာတင်မရတာ အဲဒီက အင်ဘောက်စ်မှာ မေးခွန်းတွေလာတယ်။ ပြန်ဖြေလို့လည်းရတယ်။ ဘယ်လို နေရာကနေ စာရေးကြလည်း မသိ။ ကျွန်တော်မသိတာတွေက အတော်များတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်မှာ မြန်မာစာသင်ကြားနည်းတွေက ဟိုအရင်ကတည်းက ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ အခုလည်း မရှင်းပါ။ စာသင်ခါစ ကျောင်းသားတွေအတွက် မလိုအပ်ပဲ ခက်ခဲစေတယ်။ လွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် သင်ကြားပေးသင့်တယ်။
သရအက္ခရာဆိုတာ ဘာလဲ။ စာအုပ် တအုပ်နဲ့တအုပ် မတူပါ။ တူသင့်တယ်။
သရအက္ခရာ ၁၂ လုံးရှိတယ်။ အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အံ၊ အို။
အဲတာကို အ၊ အာ၊ အိ၊ အီ၊ အု၊ အူ၊ အေ၊ အဲ၊ အော၊ အော်၊ အံ၊ အို လို့လည်းသုံးလာတယ်။
ဗျည်း (ဝဏ္ဏ) ၃၃ လုံးရှိတယ်။ က ကနေ အ အထိ။
ဗျည်းတွဲသင်္ကေတ ၄ ခုရှိတယ်။ ယပင့်၊ ရရစ်၊ ဝဆွဲ နဲ့ ဟထိုး။
နှစ်ခုပေါင်း ဗျည်းတွဲသင်္ကေတ ၅ တွဲ။ ယပင့် + ဝဆွဲ၊ ရရစ် + ဝဆွဲ။ ယပင့် + ဟထိုး။ ဝဆွဲ + ဟထိုး။
သုံးခုပေါင်း ဗျည်းတွဲသင်္ကေတ ၂ တွဲ။ ယပင့် + ဝဆွဲ + ဟထိုး။ ရရစ် + ဝဆွဲ + ဟထိုး။
ဗျည်းအသတ်တွေ ရှိတယ်။ က်၊ င်၊ စ်၊ ဉ်၊ ည်၊ တ်၊ န်၊ ပ်၊ မ်၊ ယ်။
မာဂဓ၊ သက္ကတ (ဆန်းစ်ကရစ်) နဲ့ ပါဠိတွေကနေလာတဲ့စာလုံးတွေမှာ အသတ်တမျိုးရှိတယ်။ ဂ်။ ခ်။ ဇ်။ ဉ်။ ဋ်။ ဌ်။ ဏ်။ ဒ်။ ဓ်။ ဗ်။ ဘ်။ လ်။ ဝ်။ သ်။ ရ်။ သ်။ ဟ်။ ဠ်။
အခြေခံသင်ပုန်းကြီး ၂၁ လုံးရှိတယ်။
အ၊ အာ၊ အား၊
အိ၊ အီ၊ အီး၊
အု၊ အူ၊ အူး၊
အေ၊ အေ့၊ အေး၊
အဲ၊ အဲ့၊ အဲ၊
အော၊ အော့၊ အော်၊
အံ၊ အံ့၊ အံး။
အက္ခရာ ခေါ် အတိုရေးသင်္ကေတ ၃ လုံး
၏၊ ၍၊ ၌။
အခြေခံသင်ပုန်းကြီး ၂၁ လုံးကနေ ပွါးလာတာက အောက်မြစ် (့  ) နဲ့ ဝိသဇ္ဇနီ ခေါ် ဝစ္စပေါက် (း)။ အဲတာတွေကို နုတ်ပယ်ပြီး အ၊ အာ၊ အိ၊ အီ၊ အု၊ အူ၊ အေ၊ အဲ၊ အော၊ အော်၊ အံ ၁၁ လုံး နဲ့ အို သရပါပေါင်းတော့ သရ ၁၂ လုံး ဖြစ်လာတယ်။
ဝစ္စပေါက်ဆိုတာ (း) ကိုခေါ်တာတော့ လူတိုင်းသိကြတယ်။ (့ ) က အောက်မြစ်။ အဲတာ ၂ ခုတွဲသိရတယ်။ အသံထွက် မတူကြပါ။ ကကြီးခခွေး အားလုံးကို အဲတာ ၂ ခုလုံး ထည့်ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေ မရှိပါ။ ငါး ရှိတယ်။ ငါ့ ရှိတယ်။ ကား ရှိပေမဲ့ ကာ့ မရှိ။
နာမ်၊ နာမ်စား၊ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာ၊ ကြိယာဝိသေသန တို့၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ထူးခြားလေးနက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့သော စကားလုံးသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း (၃) မျိုး ရှိသည်။
၃။ ပုဒ်ပြောင်းပစ္စည်း တို့ ဖြစ်သည်။
မှု ဆိုရင်ပြည့်စုံနေပြီ။ အဲတာကို မှု့ လို့ရေးနေကြာ မှားတယ်။
စာသင်ရာမှာ စာနဲ့ရေးပြတာက တခါတလေ ပိုနားရှုပ်စေတယ်။ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပါဠိနဲ့သင်နေရတာကိုက ခက်ခဲစေတယ်။ မြန်မာလိုလည်း တယောက်တမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်။
ဝါစင်္ဂ ရှစ်ပါးသင်ရတယ်။ နာမ်၊ နာမဝိသေသနနဲ့ ကြိယာဝိသေသနတွေက တော်သေးတယ်။ ဝိဘတ်ဆို ဘာလဲမသိ ဖြစ်တယ်။ သမ္ဗန္ဓနဲ့ အာမေဋိတ်ဆို ပိုခက်ပြီ။ ကြိယာကို အသံထွက်နည်းက သင်ပေးရသေးတာ။
၁။ နာမ် = လူတဦးတယောက်၊ နေရာတနေရာ၊ အရာဝတ္ထုတခု၊ အမည်တခု၊ အတွေးအခေါ်တခု၊ ဖြစ်ခြင်းတခု။
၂။ နာမ်စား = နာမ်နေရာမှာ အစားသုံးတယ်။
၃။ ကြိယာ = တစုံတရာ (သို့) တစုံတဦးက အခြေအနေတခုတွင် ပြုလုပ်ဖော်ပြကြောင်း ပြောသောအရာ။
၄။ နာမဝိသေသန = နာမ် (သို့) နာမ်စားတခုရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို ဖော်ပြတယ်။
၅။ ကြိယာဝိသေသန = ကြိယာ/နာမဝိသေသန/ကြိယာဝိသေသန တခုရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို ဖော်ပြတယ်။
၆။ ဝိဘတ် = ဝါကျတကြောင်းရှိ နာမ်၊ နာမ်စားနဲ့ အခြားစကားလုံးတွေကို ဆက်စပ်ပေးတဲ့ စကားလုံးဖြစ်တယ်။
၇။ သမ္ဗန္ဓ ခေါ် စကားဆက် = စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေကို ဆက်စပ်ပေးတယ်။
၈။ အာမေဍိတ် = အားကောင်းတဲ့ ခံစားမှုကို ဖော်ပြပေးတဲ့ စကားလုံးတလုံး (သို့) စကားစုတခု ဖြစ်တယ်။
အဲလိုရှုပ်တာမျိုးတွေကို လွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် အများလက်ခံတဲ့စာလုံးတွေ ပြောင်းပေးနိုင်သင့်တယ်။ အဆင့်တွေ နည်းစေရတယ်။ ပါဠိနဲ့ သက္ကတ ခေါ် ဆန်းစ်ကရစ်စာလုံးတွေ နည်းစေရမယ်။ အခုတော့ မလိုအပ်တဲ့ စသတ်တွေ အောင်မြစ်တွေ ထည့်နေကြတယ်။ မှန်နေပြီးသားကို လွဲအောင်လုပ်ခိုင်းတာကို ခေတ်ကာလလို့ လာလာပြောနေကြတယ်။ ဂွကျတယ်။
Spin doctor ဆရာဝန် မဟုတ်
မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာ spin doctor ကို မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်လဲ တဆိတ်လောက် ရှင်းပြပေးပါ ခင်ဗျာ။
Spin doctor ဆိုတာ ဆရာဝန် မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးအသုံးဝေါဟာရတခုဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတခုကိုယ်စား မီဒီယာကို ပြောဆိုဖြေကြားဖို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ ကိုယ့်ပါတီအကြောင်း အကောင်းထင်မြင်စေအောင် ပြောဆိုတတ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်တယ်။ public relations ခေါ် PR စပယ်ရှယ်လစ်။
ဒေါက်တာအစစ်တွေက အဲဒီပညာမှာ ညံ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် ဘလော့ရတာ ၇၀၀ ကျော်ပြီ။
မြန်မာစာ ထပ်ဖြည့်တင်ပြစရာ ရှိနေပြီ
မြန်မာရှေးထုံးစကားမှာ ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့ ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားအတိုင်း ရှေးမြန်မာစာ ဆရာ့ ဆရာကြီးများ ရှေးရေးထုံး ရှေးရိုးစွဲသုံးစွဲရေးသားခဲ့ သည့်အတိုင်းသာ သုံးစွဲရေးသားသင့်သည် ဟုထင်မြင်မိပါသည် ။ ဂဏန်းသင်္ချာ ကိန်းဂဏန်းများအတွက်သာ တစ်ဟုသုံး၍ မြန်မာစာတွင် တဟု သာသုံးသင့်သည်ဟု မိမိ၏ ယူဆထားချက်ကို ဆရာ၏အထောက် အထားနှင့်ရှင်းပြမှုများက ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးပါဆရာရှင့်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာစာ မြန်မာစကား၏အဓိပ္ပါယ်လေးနက်မှု ဝေါဟာရကြွယ်ဝချမ်းသာမှု စကားလုံးတိုင်း ကိုယ်ပိုင် အနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိနေမှုများ တွေ့ မြင်လာသောအခါ ပိုမိုမြတ်နိုးတန်ဖိုး ထားသင့်ကြောင်းတွေး မိလာသည့်အခါ တစ် အသုံးတွေ့လျှင် ဖတ်နေသည့်စာ ဖတ်နေသည့်ကဗျာ၏ တန်ဖိုးအရသာပျက်သွားသည်ဟုခံစားရပြီး ငိုချင်းတောင် ချမိမတတ် ဖြစ်ရပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနတွင် ဆရာကြီးဦးခင်အေး (ဓနုဖြူ -မောင်ခင်မင်) မြန်မာစာ အရေးအသား မြန်မာစာအသုံးစာအုပ် ဘဝအတွေ့ အကြုံစာအုပ် များအပါအဝင်စာအုပ် တစ်ရာ အထိထုတ်ဝေ ပြီးသောဆရာကြီး မောင်ခင်မင်သက်ရှိထင်ရှားရှိခိုက် ဤ တ နှင့် တစ် တွင် တ အသုံးသည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြုပေးမည့် သူမှာ ဆရာကြီးဦးခင်အေး (ဓနုဖြူ - မောင်ခင်မင်) ဟု မြင်မိပါသည်ဆရာရှင့်။
ကျေးဇူး။ ထပ်ဖြည့်တင်ပြစရာ ရှိနေပြီ။ ဆရာ မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) က ဟိုအရင်က တ နဲ့ရေးတယ်။ အခု တစ်နဲ့ ရေးနေတယ်။ နမူနာစာတမျက်နှာ တင်ပြပါတယ်။
မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) ရေးသာထားတဲ့ စကားပြေသဘောတရား စကားပြေအတတ်ပညာစာအုပ်ကို အကိုးအကားအဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ စာရေးသူကိုယ်တိုင် တကို အမှန်အတိုင်းရေးသားပါတယ်။ စကားပြေပုံစံ ကိုးကားချက်များမှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ စာပေညာရှင်တွေအားလုံးလည်း သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။
ဦးကုလား၊ ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်၊ ဒေါက်တာကျော်စိန်၊ ဦးကျော်ရင်၊ ကြီးမောင်၊ ကြယ်နီ၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ခင်နှင်းယု၊ ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်၊ ဗိုလ်ခွန်ဖြူ၊ အရှင်ဒါန့်ကိုင်ဆရာတော်၊ ဦးဂုဏ်ဘဏ်၊ ဆန်းထွန်း (မန်းတက္ကသိုလ်)၊ ဇေယျ၊ ဇော်ဂျီ၊ ညောင်ကန်ဆရာတော်၊ ဒဂုန်တာရာ၊ ဗိုလ်တာရာ၊ တော်စိန်ခို၊ တက်တိုး၊ တိုက်စိုး၊ ဦးတင်မောင်၊ တင်မြင့်အောင်၊ ဆရာဝန်တင်ရွှေ၊ ဦးတင့်ဆွေ၊ ဦးထွန်းလှ၊ နတ်နွယ်၊ နန္ဒ၊ ပါရဂူ၊ ပီမိုးနင်း၊ ဦးပုည၊ ပဉ္စမတန်း မြန်မာဖတ်စာသစ်၊ ဦးပြုံချို၊ ဦးဖေမောင်တင်၊ ဗညားဓလ၊ ဦးဘခိုင်၊ သခင်ဘသောင်း၊ ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၊ မဟာမင်းလှခေါင်၊ မင်းကျော်၊ မင်းယုဝေ၊ မင်းရှင်၊ မင်းသုဝဏ်၊မောင်ကျော်သာ၊ ဦးမောင်ကြီး၊ မောင်ဆုရှင်၊ မောင်ထင်၊ တက္ကသိုလ်မောင်မောင်ကြီး၊ မစ္စတာမောင်မှိုင်း၊ မောင်ယဉ်ခန့်၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၊ မောင်သစ်လွင် (လူထု)၊ မန်းတင်၊ မြသန်းတင့်၊ မှန်နန်းရာဇဝင်တော်ကြီး၊ ရန်အောင်၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ဦးလတ်၊ လယ်တီဆရာတော်၊ ဝရာဘီ သင်္ဃနာထ ဆရာတော်၊ ဦးဝန်၊ ရှင်မဟာသီလဝံသ၊ သော်တာဆွေ၊ သေကျတောင်ဆရာတော်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ သိန်းဖေမြင့်၊ အံဘွယ်ဝဲ (သုတပဒေသာစာစောင်)၊ အောင်စိုး၊ အောင်ဗလ၊ ဆင်ဖြူကွန်းအောင်သိန်း၊ ဦးအုန်းမြင့်၊ အုံးမောင်၊ ပါမေက္ခ ဦးဧမောင်၊ ဦးသြဘာသ (တေမိယဇာတ်တော်ကြီး)၊
တမြန်နှစ်က လွှတ်တော်ကနေ မြန်မာစာအဖွဲ့ကို တပင်တိုင်ကျွန်းဥပဒေသတ်ပုံ မေးတယ်။ တစ်ပင်တိုင်လို့ ဖြေပါသတဲ့။ အဲဒီနေ့က လွှတ်တော်မှာ သတင်းယူနေသူတဦးက ပြန်ပြောလို့ သိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာစာ ပြန်လည်မှန်ကန်တည့်မတ်လာရေးအတွက် ကနေ့ နိုင်ငံတော်လစာ စားနေတဲ့ ပညာရှင်တွေဟာ ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ် အားကိုးရလောက်မယ် မထင်ပါ။ သိလည်း သူတို့မှာ ဖိအား ဆွဲအား တွန်းကန်အားတွေ ရှိနေကြတယ်။ အဲတာ မြန်မာစာရဲ့ ကံကြမ္မာ။
သူက သွေးတိုးနည်းနည်းနဲ့ ကိုလက်စထောနည်းနည်းရှိတယ်။ ဆီးချိုကိုလည်း သတိထားနေသူ။ ဆားမပါ သကြားမပါ။ ဒီအရပ်မှာ ဈေးချိုတဲ့ ဘရိုကိုလီပြုတ်ပြီး အရည်လုပ်ထားတာ။
ရောဂါတွေမရှိသေးသူကတော့ အားနာနာနဲ့ အုန်းထမင်းနဲ့ အမဲသားဟင်း၊ ချဉ်ပေါင်ချဉ်ရည်၊ ပုစွန်ခြောက်နဲ့ ငရုတ်သီးကြော် စားတယ်။
ချဉ်ပေါင်ရွက်က တနှစ်စာ ရေခဲခန်းထဲသိမ်းထာတာ။ အသစ်မပေါ်ခင် ကုန်အောင်ရှင်းရမယ်။ အသီးအရွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားရသူတွေ နေကောင်းကြပါစေ။
ကွန်မင့်တခု ရတယ်။ ကျေးဇူး။ ခုံတန်းတစ်လျှောက်တဲ့ တ မသုံးဘဲ တစ် တွေသုံးနေလို့ ဖတ်ရတာတော်တော် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပါသည်ဆရာ။ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ တွေပါ လိုက်သုံးကုန်လို့ မြန်မာစာ အတွက် နောင်ရေးစိတ်လေးမိပါ၏ ။ သမီးတော့ ကိုယ်ကလည်းစာတတ် ပေတတ်ကြီးလည်း မဟုတ်တော့။ ရှေးစာမူတွေ အပါအဝင် အထောက်အထားပေါင်းစုံနဲ့ စေတနာမေတ္တာရှေ့ထား ရှင်းပြပေးနေတဲ့ ဆရာ့ Acc မှာ သွားဖတ်ကြဖို့ဘဲ ချစ်သောစိတ်နဲ့ ညွှန်ပြ မိပါတယ်ဆရာရှင့် တဲ့။
ကျွန်တော် စာအရေးအသားအကြောင်း ရေးတာ နှစ်အတော်ကြာပြီ။ ကိုယ်က တတ်လှလို့တော့ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်လုပ်ခဲ့ရစဉ် စောစောပိုင်းက ပြည်တွင်းကစာအုပ်တွေ အပြင်ထုတ်မရခဲ့။ ရလာတော့ စာအုပ်အဖုံးတွေ ဖတ်တာနဲ့ အံ့သြခဲ့ရတယ်။ ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပြန်ထုတ်ကြတာ သတ်ပုံတွေကို တမင်တကာ မှားအောင် ပြင်ထားကြတယ်။ အဲတာက အခုထိ။
နေမကောင်းလို့မေးတာတွေကို ဖြေရချိန်မှာတော့ မေးခွန်းတွေရဲ့ ၈၀-၉၀% က အမှားမကင်းတာ တွေ့ရတယ်။ အဲတာနဲ့ စာအရေးအသား ရေးပါတယ်။ အထောက်အထား အကိုးအကားတွေကို လိုက်ရှာပြီး တင်ပြပါတယ်။ သတ်ပုံပြောင်း သမိုင်းကြောင်းကိုလည်း ရှာဖွေပြီး တင်ပြတယ်။
စာရေးဆရာတွေ ဒီမြို့မှာလာပြီးဟောပြောကြစဉ်က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကား ပြောရတဲ့အခါ အဲလိုစာအုပ်တွေကို တအုပ်မှ မဖတ်ချင်ကြောင်း အားမနာပါးမနာ ပြောလိုက်မိတယ်။ စာရေးဆရာကဗျာဆရာတွေကို အိမ်မှာ မနက်စာဖိတ်ကျွေးတော့ ဆရာချစ်ဦးညိုက ပြောရက်လေခြင်းလို့ ပြန်ပြောပြတယ်။ ဆောရီး။ ကန်တော့။
မတတ်နိုင်ပါ။ မြန်မာစာသတ်ပုံကို အတင်းအဓမ္မပြောင်းခြင်းဟာ သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ကရေးတဲ့ တ နဲ့ တစ် ဘာကြောင့်လို့ ရှင်းပြချက်ဟာ တရားရုံးမှာ ကိုယ့်အမှုသည်အနိုင်ရရေး လျှောက်လဲချက်သဘောဖြစ်နေတယ်။ သူ့တရားခံ ဓါးပြတိုက်ခဲ့တာတော့ အဲဒီရှေ့နေက သိပါတယ်။
အရင်ရေးထားတာတွေက မှားနေလို့ပြောင်းတာမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ဝန်ခံတတ်သူ မတွေ့သေးပါ။
စာမွန်ပေကောင်း ကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရသူတယောက်က ကွန်မင့်ရေးပါတယ်။ ဆံထုံးတော်ကြီး တမာသီးနှင့် ခါးစီးဝတ်လဲ ချုပ်စပြဲကို တွယ်အပ်နှင့်တွယ်လူမြင်သမျှ စိတ်ပျက်အောင် လှပါတဲ့ မရေသည် တဲ့။ သတ်ပုံ နည်းနည်းပြင်ပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။
ဆံထုံးတော်ကြီး၊ တမာသီးနှင့်၊ ခါးစည်းဝတ်လဲ၊ ချုပ်စပြဲကို၊ တဲအပ်နှင့်တွယ်။ လူမြင်သမျှ၊ စိတ်ပျက်အောင် လှပါတဲ့၊ မရေသယ်။ ။ ကုန်သွယ်ရေရောင်း၊ စီးပွားကြောင်းနှင့်၊ လူကောင်း ကိုယ့်မောင်၊ ရုံးလှဆောင်၊ ဝအောင်စား၍၊ ခါးဝတ်တဲ့ပြင်၊ လက်ကပ်-ခြေကပ်၊ ပိုမိုမြတ်လို့၊ အဖတ်တင်၊ အိမ်တွင်အများ၊ သံသေတ္တာနှင့်၊ လုံးစွာထား၊ ငွေသားလေးရွေးရှိပါတယ်။ ။ သည်ပစ္စည်းတွေ၊ လေးရွေးငွေကြောင့်၊ စိတ်သေလက်ချ၊ မအိပ်ရနိုင်ဘူး၊ ညမှုညလူ၊ သူခိုးများ ပူလွန်းလို့၊ ကိုယ်ထူ-ကိုယ်ထ၊ ကင်းဝတ်လှဲ့၍၊ စောင့်ခဲ့ရ၊ ကာလ မနည်းကြာပါပြီ။ ။ ညစာနံနက်၊ စားရရက်မှာတော့၊ မြက်သီးရောရါ၊ မုရင်းဆိုတဲ့၊ ဆန်အိုတာကို၊ ရတနာချဉ်ပေါင်၊ ငါးပိအရှင်း၊ ဆီမဆင်းတဲ့၊ ဟင်းများနောင်နှင့်၊ အာခေါင်ကိုဆွတ်၊ မဝင်မချင်း၊ လည်ချောင်းကိုစင်းပြီးလျှင်၊ အတင်းသာသွတ်ရတယ်။ ။ ခါးဝတ်လဲမှာ၊ မျက်မြင်ပါဘဲ။ ဥစ္စာပြည့်စုံ၊ ဓနဂုဏ်နှင့်၊ ကုံလုံဘိခြင်း၊ မသိမ်ဖျင်းပါဘူး၊ လူဆင်းရဲ မမှတ်ပါနှင့် အမိငယ်။
ဦးပုညရေးသားတဲ့ ရေသည်ပြဇာတ်ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းမှာ ပြဋ္ဌာန်းတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ ဆံထုံးတော်ကြီး၊ တစ်မာသီးတဲ့။
မင်္ဂလာပါရှင့်ဆရာ အမ တယောက်အသက် ၃၀ အပျိုပါဆရာ ကန်တော့နော်ဆရာ ရာသီ တလတခါ ပုံမှန် လာပါတယ်ဆရာ။ ခေါင်းမှာ ဆံပင်ဖြူတွေပေါက်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်လာပေမယ့် နုတ်ခမ်း မေးစေ့နဲ့ ခြေထောက်တွေမှာ အမျိုးသားများလို အမွေးရင့်တွေ ထွက်လာလို့ OG ပြတာ eposoft တနေ့တလုံးသောက်ခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် မသက်သာပဲ အမွေးများက ရှည်လာနေလို့ ဆရာ့ဆီ ရိုသေစွာဖြင့် အကူညီထပ်မံ တောင်းခံလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ အမက အသက်မရှင်ချင်သည်ထိ စိတ်ထဲခံစားနေရတယ်လို့ ပြောလာလို့ပါဆရာ။ ဆရာ့ ဆောင်းပါးများကိုလဲ ဖတ်ပါတယ် ဆရာ။ တလွဲဆံပင်ကောင်းခြင်းတို့ စသည် ဖတ်ပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့် သူတပါး၏အသက်တချောင်းမို့ ဆရာ ကိုယ်တိုင် လမ်းညွှန်သည်ကိုပဲ ပြောပြပေးချင်လို့ပါဆရာ။ ယုံကြည် အားကိုးစွာဖြင့် စောင့်မျော်နေပါတယ်ရှင့်ဆရာ
တလွဲဆံပင်ကောင်းသူများစာထဲမှာ လူတာနဦးစီအတွက် ဆေးနည်းမပါ။ စမ်းသပ်ကုသပေးတဲံဆရာဝန်ကညွှန်ရတယ်။
Body hair တလွဲဆံပင်ကောင်းသူများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/body-hair.html
Flutamide isatype of anti-androgen that’s used with other medications to treat certain types of prostate cancer. Flutamide binds to the androgen receptors in prostate cancer cells, which blocks androgens from binding to the receptors. This prevents androgens from encouraging prostate cancer cell growth.
Spironolactone (Aldactone) isatype of anti-androgen that’s been used for 30 yearsTrusted Source to treat hormonal acne and excessive body hair. People transitioning may take it to reduce masculine traits. Although there’s little evidence to support its use, some doctorsTrusted Source also prescribe it for female pattern baldness.
Cyproterone was one of the first anti-androgens. It’s been usedTrusted Source with other medications to treat women with PCOS. It’s also been shown to decreaseTrusted Source testosterone levels and reduceTrusted Source the production of acne-causing oils.
Side effects ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။
higher risk of birth defects if taken during pregnancy
anti-androgen resistance, meaning the medication stops working
မေးခွန်းရေးသူ သတ်ပုံမှန်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
မနက်ထ ညကရေးထားကြတဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ဖတ်ပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ကျန်းမာရေး တခုစီတော့ မဖြေတော့ပါ။
မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာ ခေါ် ပုံသေနည်းနဲ့ သင်ပေး ရေးသား ဟောပြောနေတာတွေတိုင်းဟာ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးကျတာ မဟုတ်ပါ။ မ နောက် ဘဲ လိုက်။ ခင်ငူဂေါဒေါပုံဝ။ ရေတွက်လို့ရရင် တစ်။ မူကွဲစာလုံးတွေကို ပြစ်ပယ်ပြီး တသွေးတသံတမိန့် ရေးနည်း မမှန်ပါ။ သမတ နဲ့ သမ္မတ၊ ပဌမ နဲ့ ပထမ၊ ဒါး နဲ့ ဓါး မုံ့ နဲ့ မုန့်၊ ကစွန်း နဲ့ ကန်စွန်း၊ ငပိ နဲ့ ငါးပိ၊ ယက္ကန်း နဲ့ ရက်ကန်း၊ ကျမ္မာ နဲ့ ကျန်းမာ၊ လက်ဖက် နဲ့ လ္ဘက်၊ မြမ္မာ နဲ့ မြန်မာ။
ဗမာ နဲ့ မြန်မာ မူကွဲမဟုတ်။ အတူတူသုံးနိုင်တယ်။ အရင်ကဗမာလို့ရေးထားတာတိုင်းကို မြန်မာလို့ အစားမထိုးရ။
ဆေးပညာစာတွေကို အကိုးအကားတွေထည့်ရေးရတော့ နားလည်းရခက်စေတယ်။ ဆောရီး။ တချို့က ဒါလုပ်၊ ဒါမလုပ်ကိုသာ သိချင်ကြတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ အားဆေး လူတိုင်းမလိုအပ်ပါ။ ဖေါလစ်အက်စစ် တမျိုးသာ အများဆုံးညွှန်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေး၊ အိုမီဂါ-၃ လူတိုင်းလိုတာ မဟုတ်ပါ။ သွေးအားနည်းသူတွေ သံဓါတ်လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်မမြဲတတ်သူတွေ ပရိုဂျက်စတီရုန်းဟော်မုန်းဆေးတမျိုးလိုတယ်။
ကြော်ငြာကောင်းတိုင်း၊ လူပြောများတိုင်း ဟုတ်တာ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ကိုယ်တသက်လုံး စားသောက်လာတာတွေထဲက အနည်းဆုံး ၉၅% စားသောက်နိုင်တယ်။ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီးမှည့် သဘောင်္သီးစိမ်းလည်းပါတယ်။ အဲတာတွေစာလို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်မယ်လို့ပြောတာ မမှန်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချင်သူတွေ တနေ့မှာ ၃ ယောက်လောက်က မေးတယ်။ သူတို့လည်း အဲဒီနည်းသိကြမှာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်လိုသူအရေအတွက် လျော့မသွားပါ။
လူအများစားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေ စားနိုင်တယ်။ တက်တက်ဆိုတဲ့အစာ မရှိပါ။ ငန်တဲ့ အစားအစာတွေက သွေးတိုးထက်မယ်။ ငန်ဆိုတာ ဆိုဒီယမ်ပါတာတွေ။ ဆိုဒီယမ်ပါတာတွေဆိုတာ ဆား၊ ဟင်းချိုမှုန့်၊ အသားမှုန့်၊ ငပိ၊ ငံပြာရေ၊ ငါးခြောက်၊ ဆားနဲ့လုပ်ထားတဲ့တာရှည်ခံအစားအစာတွေ အချဉ်တည်ထားတာတွေ။ ချိုတဲ့အစား အသောက်တွေက ဆီးချိုတက်မယ်။ ပြည့်ဝဆီပါတာတွေက ကိုလက်စထောတက်မယ်။
သူများတွေက တက်တယ်လို့ပြောတဲ့အစာ အသံကြားတာနဲ့ မစားရသေးခင်တက်နေကြပြီ။ အစားတွေမှာ အဆိပ်လို့ တံဆိပ်ကပ်မထားရင် စားနိုင်တယ်။
သြော် လူ့ဘုံခန်းဝါ၊ လူ့ပြည်ရွာမှာ၊ ဝမ်းစာခဲခက်၊ မုရင်းထမင်း၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်းနှင့်၊ ဆန်တွင်းက နက်လွန်းလို့၊ အသက်ရှိစဉ်၊ မသေခင်ကို၊ ကောက်လျင်ကြီးဆန်၊ နီတာလံနှင့်၊ ငါးသန်သေးနုပ်၊ ရေလုံပြုပ်များကို၊ တလုပ်ကယ်ဝဝ၊ စားလိုက်ရလျှင်ဖြင့်၊ အာကပါးစပ်၊ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်လေငဲ့၊ မရပ်မနား၊ ရေကိုရောင်းလို့၊ ဝမ်းကျောင်းပါငြားကတဲ၊ စားရသည့်နေ့၊ တလလုံးတွင်မှ၊ သုံးနပ်လောက်ကယ်သာ တွေ့ရတယ်။ ။ ငွေ့နှယ်ကြေးနှယ်၊ ဘဟာ့နှယ်များကို၊ ကွယ်လေငဲ့၊ ပိတ်ပိတ်ပျောက်၊ အမွဲတကာ့ထွတ်ခေါင်၊ ဖွတ်မင်းနောင်မှာ၊ ပြာတောင်ကြီး ပေါက်ကရော့၊ ပြောင်မြောက်အောင် မွဲနိုင်တဲ့၊ ငါကိုယ်နော်။
ဦးပုညရေးသားတဲ့ ဂင်္ဂါမာလ ခေါ် ရေသည်ပြဇာတ်၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာထုတ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်းမှာ သင်ခဲ့ရ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ တလုပ်ကယ်ဝဝကို တလုပ်ကယ်ဝဝလို့သာ ရေးရတယ်။ တလလုံးတွင်မှကို တလလုံးတွင်မှလို့သာ ရေးရတယ်။
မြန်မာပြည် ဓါတ်ငွေ့သည်ဘဝရောက်တော့ သတ်ပုံတွေ ပြောင်းကုန်တယ်။
ရာသီစာ မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်ပြီတဲ့။ သမီးက တင်ထားတယ်။ တခြားသူတွေကလည်း တင်ကြတယ်။ မုတ်သုန်ဥတုရှိတဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ ထိုင်းတို့မှာလည်းရှိတယ်။ False Earthstar (Truffle) လို့ခေါ်တယ်။ စည်သွပ်ဗူးနဲ့ ထိုင်းကလာတာကို Thai Truffle လို့ရေးတယ်။ မြန်မာပြည်ထွက်လားတော့ မပြောတတ်။
အင်ပင်တွေအောက်မှာ ရှာရတာ။ အင်ပင်က အတော်အသုံးဝင်တယ်။ အင်ဖက်က အော်ဂဲနစ်ထုပ်ပိုးစရာ။ အင်ဖက်ကို အင်ပြင် ခေါ် အလာဂျီအတွက် ဆေးနည်းလုပ်ကြတယ် မမှန်ပါ။ မှားတယ်။
အင်ဖက်ကကြီးလို့ မိုးရွာတဲ့အခါ ခေါင်းပေါ်မှာမိုးကြတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေတဲခေါင်မိုးမှာလည်း အင်ဖက်နဲ့။
အကာဆူးခက် အင်ဖက်အမိုး ကျူရိုးတိုင်ထူ နေပူကျဲကျဲ ဝက်သိုက်ထဲတွင် အုတ်ခဲခေါင်းအုံး အိုးတလုံးဖျာမရှိ ဘူမိကမ္ဗလာ မြေမွေ့ယာနှင့် ချူချာတော်မူလှသော -
အင်သားကလည်း အကောင်းစားမဟုတ်။ ပရိဘောဂခပ်ညံ့ညံ့သာ လုပ်နိုင်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ အဲလိုဟာမျိုးတွေ သုံးရတယ်။ သစ်စက်ကရောင်းတဲ့ အင်သားဖြစ်စတွေကို ဝင်းထံရံလုပ်တယ်။ ထင်းဆိုက်တယ်။ ဖင်ထိုင်ခုံလုပ်တယ်။ လွှဖြတ်ရတာ လွယ်တယ်။ သံရိုက်ရလည်း လွယ်တယ်။ ကြာကြာ အသုံးမခံပါ။
အင်ဥ နုမှကောင်းတယ်။ အင်ဥလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားရသူတွေ နေကောင်းကြပါစေ။
ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ စသည့် စကားလုံးတွေ ဘယ်ကာလမှဆင်းသက်လာခဲ့ပါသလဲခင်ဗျ။ ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါနေသလိုဖြစ်နေသည်ဟုထင်မိပါသည် ထိုအသုံးအနှုန်း အစား ငါ ဟုသုံးစွဲသင့်ပါသလော။
ငါဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူသာ သုံးနိုင်တယ်။ နေရတကာ ငါလို့ရေးရင် -
ကျွန်မ နှင့် ကျမ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_96.html
ကျွန်တော် ကျွန်နော် ကျနော် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/blog-post_76.html
ကျွန်တော် ဖြေပါရစေ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_773.html
ကျမခေတ်မှ သမီးခေတ်သို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_96.html
တို့ နှင့် ဒို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_37.html
ပညတ်လို့ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလုံး အထအနကောက်ယူတာမှာ မမှန်တာက များတယ်။ သင်လေချာလေခို့ ရယ်စရာသာပြောနိုင်တယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးသင်္ချာပညာရှင်တွေ ရှေးကတည်းက တော်ကြတယ်။
မြန်မာဆိုတာ မြန်တယ်၊ မာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ မြမ္မာလို့ရေးစဉ်ကလည်း အခုထက်တော့ အပြေးမနှေးခဲ့ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာမားရေးခဲ့စဉ်က ကျွန်းစွယ်အားကစားပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထိပ်က။
ဘူး ဖူး ဗူး
ဆရာ ကြားဖူးတယ်မြင်ဘူးတယ် ဖ နဲ့ ဘ ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆရာ ဘယ်သူမေးမေးသိပ်မသိကြလို့ပါဆရာ
ကြားဘူးနားဝ (အငြင်း မဟုတ်)
ဘုရားဖူးဘူးသည် (အငြင်း မဟုတ်)
ဘူးပင် (နောက်သတ်ပုံ)၊ ဗူးပင် (ယခင်သတ်ပုံ)
ဆေးဘူး (နောက်သတ်ပုံ)၊ ဆေးဗူး (ယခင်သတ်ပုံ)
ဘူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲ (နောက်ပေါ်)
ဗူးတလုံးဆောင် (ဗူးသီးတလုံးဆောင်) အိုတောင်မဆင်းရဲ (မူလစကားပုံ)
မဟာစည်ဆရာတော်ရေးသားတဲ့ ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းမှာ ထို့ကြောင့် မြင်ဘူး ကြားဘူး နံဘူး စားဘူး တွေ့ထိဘူး ကြံသိဘူးသော ထိုအတိတ်ရုပ်နံတို့ကို ပြန်၍စဉ်းစားမိတိုင်း ဃနပညတ်ထင်ရှားလျက် နိစ္စ သုခ အတ္တဟု ထင်မြင် စွဲလမ်းမှုသည် ဖြစ်ပေါ်၏။
အခုသတ်ပုံစာအုပ်မှာ ဘူးရွက်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဗူးရွက်လို့ ရေးတယ်။ ရေဗူးလို့ ရေးတယ်။ ဗူးတလုံးဆောင် အိုတောင်မဆင်းရဲလို့သာရေးရတယ်။ ဘူးခံပြီး ငြင်းတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ဗူးဆို ဖရုံမသီးတာနေရာတိုင်းမှာတော့ မကောင်းပါ။ မြန်မာစာကို ယူနီဖေါင်းဝတ်ပေးလို့မရပါ။ ဗူးလေးရာ ဖရုံမဆင့်သင့်ပါ။
လျက် နှင့် လျှက် ကို ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးရလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်ဆရာ။ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ဆိုတဲ့ ဝါကျမှာ လွန်ခဲ့သော ၂၅နှစ်က ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်လို့ ရေးတယ်လို့ အဒေါ်ကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဟုတ်ပါသလားရှင့် ဆရာ။
ကဝိဓဇသတ်ပုံကျမ်းကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှာထုတ်တယ်။ ၆၆ နှစ်ရှိပြီ။ မင်းကောင်းပေလျက် မင်းမြောင်ဖျက်လို့ ရေးပါတယ်။
မင်းကောင်းပါလျက် မင်းမြှောင်ဖျက်သည်လို့ တောင်ဖီလာဆရာတော်က ဖျက်စုများမှာရေးတယ်။ အဲတာကို ကူးရိုက်တင်သူက လျှက်လို့ မှားရေးထားတာတွေ့တယ်။ မှားတင်ထားတာက မနည်းလှပါ။
ပြည်ပန်းညို ချိုချင်ပါလျက် ဆားကဖျက်။
မုံ့တလျှက် = မုံ့ပြား (တယှက်သံထွက်သည်)။
ရောင်ဖြူ ပြိုးပြက် ဓါးသန်လျှက်သည် ထိလျက် ရှတိုင်း မှန်သည်သာ။
သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်းမှာ သန်လျှက်လို့ရေးတယ်။ နောက်ထုတ်တွေမှာ သန်လျက်လို့ရေးတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ သန်လျက်လို့ရေးပါတယ်။
တောသားတွေက လယ်တွေယာတွေအကြောင်း ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့တတ်ကြတယ်။ တချို့က ဟိုအရင်က စာသင်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းအိုအကြောင်း ပြန်ပြောင်းရေးသားကြတယ်။ တချို့က ဆင်းဆင်းရဲရဲနေခဲ့ကြရတဲ့ မိအိုဖအိုတွေကိုလည်း သတိတရ ဖွဲ့နွဲ့သီကုံးလေ့ရှိကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အဲလိုလူတွေမှာပါတယ်။ သူများထက်ပိုကဲ ရေးပါသေးတယ်။ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့ သင်ယူ ဖတ်ရှုခဲ့ရပါကြောင်း။
အခုတော့ လယ်တွေယာတွေမှာ နွားရှားလာပြီတဲ့။ တဘက်နိုင်ငံပို့စရာတွေသာ ရွေးစိုက်နေကြပြီတဲ့။ ကျောင်းအိုတွေကို ဆေးသာသုတ်ပေးနိုင်ကြတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စက်ဘီးအိုနဲ့ဆရာပျိုတွေ၊ မြန်မာစာမိအိုဖအိုတွေကို အစားထိုးမရတော့ပါ။ အဲလိုချမ်းသာတဲ့ခေတ်ကို ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ပွင့်ကြတော့မည်။ အာရှပန်းမျိုးကို ပြောတာ။
မြန်မာပြည် တချို့နေရာတွေမှာ မိုးရွာသတဲ့။ မိုးရာသီမရှိတဲ့အရပ်မှာ မိုးကပြတ်တယ်မရှိ။ မနေ့က ကလေးတွေပြန်ကြတာ အိမ်ပေါက်ဝကနေ ကားတံခါးအထိ တယောက်က ထီးမိုးလိုက်ပို့ပေးရတယ်။
အမည်နာမဆိုတာ တခါတခါ မလိုက်ဘက်ပါ။ အမည်တွေကို နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကြာပြီ။ ကျောင်းစာအုပ်မှာ ဂန္ထဝင် တို့ဗမာသီချင်းကို တို့မြန်မာလုပ်လိုက်သတဲ့။ မြန်မာစာ မိုးခေါင်ပါလေရော။
အမျိုးစစ်မှန်ရင် ဘယ်မှာရောက်ရောက် လှလှပပပွင့်တယ်။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ကျေးဇူး။ တမင် ပေါ့ပျက်ပျက် မှားအောင် ရေးသူတွေက ကိုယ့်မြန်မာစာပေကို တန်ဖိုးမထားတာပါ တကယ်အတန်းပညာအများကြီးမသင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဘွဲ့ပေးသူတွေ သတ်ပုံမှားတယ် ဒါကို လက်ခံပါတယ်။ သတ်ပုံမှားတွေကို သင်ယူခဲ့ရသူတွေရဲ့ အပြစ်လားရှင့် တဲ့။
လက်ညှိုးတွေက များတယ်။ ထိုးတာနဲ့တော့ မှန်လာမှာမဟုတ်။ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်တဲ့ဘုရင်က ရာဇဝင်ဟောင်းထဲမှာသာ ရှိတယ်။
သတ်ပုံသစ်တွေဖြစ်လာတဲ့သမိုင်း ရှိတယ်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဦးနေဝင်းကနေ လမ်းညွှန်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းကြောင့်လို့ပြောတာ အပြည့်အစုံ မမှန်ပါ။ သူက တပြေးညီအောင် လုပ်ကြလို့ပြောတယ်လို့ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း အမှာစာမှာ ရေးထားတယ်။ နောက်ထုတ်တွေမှာ အဲဒီအမှာစာ မပါတော့ပါ။ အဲတာကို လမ်းညွှန်သတ်ပုံ (သို့) ယူနီဖေါင်းသတ်ပုံလို့ အမည်တွင်တယ်။
ဦးနေဝင်း သြဇာသီးကြိုက်တယ်ပြောသံကြားတာနဲ့ ပြည်ကနေအပြန်မှာ တီအီးဟီးနိုးကားတစီးစာ ပို့ပေးတယ်တဲ့။ ဦးနေဝင်းအလွန်လား သြဇာခံတွေအလွန်လား။
အဲဒီကာလမှာ မန္တလေးအခြေပြုစာပေသမားတွေက သဘောမကျကြပါ။ သဘောမတူကြသူများစာရင်းက ရှည်တယ်။ နေရာမယူတဲ့ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေ၊ မြန်မာစာဆရာတွေက သဘောမတူကြလို့ ကိုယ့်သတ်ပုံနဲ့ ရေးလို့ရကြသေးတယ်။ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ တစ်မရေးရင် ထုတ်ဝေခွင့်မပေးပါ။ တစ်မဟုတ်တဲ့တလုံး ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ဒဏ်ရိုက်တယ်။ ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောသတ်ပုံ (သို့) ပေါ်လစီသတ်ပုံလို့ ခေါ်တယ်။
ငြိမ်ဝပ်ပိပြားတဲ့အကျင့်ကို စွဲနေကြတော့ တချို့တွေက အခုထိ ပိပြားနေကြတယ်။ ကိုယ့်စာကိုယ်ရေးကြတာကို မပြောလိုပါ။ သတ်ပုံမှန်နဲ့ရေးခဲ့တာတွေကို ပြန်ထုတ်ဝေကြတာမှာ သတ်ပုံတွေပြောင်းထုတ်ကြတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်တွေမှာ ပြင်ကြတယ်။ အမှားကိုရောင်းစားကြသူများလို့ ငေါ့ချင်တယ်။ ကန်တော့။ ဆောရီး။
ပင်နီခေတ်မှာလည်း မျက်နှာလိုမျက်နှာရသမားတွေက များတယ်။ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်လျှော့တယ်။ လျှောက်လွှာတွေ၊ အစီရင်ခံစာတွေ၊ စာတမ်းတွေကို ပြင်ရေးစေတယ်။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကြီးငယ်တွေ၊ တချို့ အယ်ဒီတာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေ၊ ပါမောက္ခတွေ။ အရင်က အမိန့်နဲ့ခိုင်းတယ်။ အခုက လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ခိုင်းတယ်။ ခေါက်ရိုးသတ်ပုံ (သို့) ကုလားထိုင်ရသတ်ပုံလို့ အမည်သစ်ရလာတယ်။ ကန်တော့။ ဆောရီး။
သတ်ပုံမှန်ရေးသူများစာရင်းကလည်း ရှည်တယ်။ ပေလေးပင် ရှင်လေးပါး၊ နဝဒေး၊ နတ်သျှင်နောင်၊ ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာ၊ ဦးပုည၊ မယ်ခွေ၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေ၊ ဦးနု၊ သိပ္ပံမောင်ဝ၊ သိန်းဖေမြင့်၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ဒဂုံရွှေမျှား၊ မောင်ထင်၊ မင်းသုဝဏ်၊ဇော်ဂျီ၊ ဦးဖိုးကျား၊ သခင်ဘသောင်း၊ ဦးဖေမောင်တင်၊ သော်တာဆွေ၊ ကာတွန်းဦးဘဂျမ်း၊ သခင်သန်းထွန်း၊ မြသန်းတင့်၊ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ အောင်လင်း၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ ခင်မျိုးချစ်၊ လူထုဦးလှ၊ ဒေါ်အမာ၊ ပါရဂူ၊ ရန်ကုန်ဘဆွေ၊ ဝင်းဦး၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ သုခ၊ ဇဝန၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ မဟာဆွေ၊ ဒဂုန်နတ်ရှင်၊ တက်တိုး၊ ထင်ကြီး၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ လှသမိန်၊ မင်းကျော်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ အောင်သင်း၊ ဒဂုန်တာရာ၊ တင်မိုး၊ ကြည်အေး၊ ရှိသေးတယ် အများကြီး။
မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်းကို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းတို့က လေ့လာသုံးသပ်ပြီးလျှင် ပြင်ဆင်သင့်သည်တို့ကို ဝေဖန် အကြံပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်လို့ ၂ဝ၁၆ မေလမှာ အကြံပြုချက်တောင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလားထိုင်ရ ဂိုဏ်းက အားကောင်းနေသေးတယ်။ တစ်ကို မထိရဲကြပါ။ ငရဲမီးသတ်ပုံလို့ ခေါ်လိုက်မယ်။ တချို့ကတော့ ပြင်လာကြပြီ။ ကောင်းတယ်။
ပညာခန်းကို ပညာနဲ့ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တာက တိုးတက်ရှင်သန်စေပါတယ်။ စာအုပ်သစ်တွေပုံကို အားကျစရာဖြစ်အောင် တင်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ သွားရည်ကျရမလား၊ မျက်ရည်ကျရမလား မပြောတတ်ပါ။
ဆရာ ကလေးအတွက် ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးလေးတွေရှိရင် ဖတ်ချင်လို့ပါ။
မေးနည်းပါ ဘလော့မှာ ဖတ်လိုတာ ရှာဖတ်နိုင်။
ကလေးကျန်းမာရေးစာတွေ စာအုပ်ထုတ်မလို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်တော်တင်တဲ့စာတွေကို စာရိုက်ကျနေတာ သတ်ပုံလွဲနေတာတွေကို ပြင်ပေးနေသူတယောက်ကို စာစစ်အကူအညီတောင်းတာ အတော်လေး ပြီးနေပြီ။ စာအုပ်ထုတ်ပေးချင်ပါတယ်လို့ ပြောလာသူတယောက်နဲ့ ထုတ်မယ်။ နှစ်ဦးလုံးက ဖရင်းတွေ။ ဖရင်း မဟုတ်ကြသေးလို့ နေရာရှာပြီး ထည့်ထားတယ်။
နောက်စာတွေလည်း ထုတ်ချင်သေးတယ်။ ရေးပြီးသားတွေက အများကြီး။ စစ်အစိုးရခေတ်တုန်းက စာပေနယ်ထဲက မိတ်ဆွေတဦးက ကျွန်တော့်စာတွေကို စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ ကလောင်နာမည်မရှိတဲ့ ကျွန်တော်က နာမည်ဝှက်တခုပါရွေးတယ်။ စာတွေကို ပေါ်လစီသတ်ပုံနဲ့သာ ရိုက်ရမှာဖြစ်လို့ စာအုပ်မထုတ်ခဲ့ပါ။
နိုင်ငံရေးဘဝဇာတ်ကြောင်းလည်း ထုတ်မလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ ဆရာမောင်စွမ်းရည်က အက်ဒစ်လုပ်ပေးမယ် ပြောထားတာ ၂ နှစ်ရှိပြီ။ ဆရာ့ကို အားနာနေတယ်။ အဲလိုစာမျိုးက အယ်ဒီတာကောင်းလိုတယ်။ ခုခေတ်မှာ အယ်ဒီတာကောင်း အတော်ကိုရှားတာ။
တိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးစက ဗလာစာအုပ်တွေထဲမှာ ဒိုင်ယာရီရေးခဲ့တာတွေ ခုနစ်အုပ်လောက်ရှိတယ်။
သိချင်တာလေးမေးရမလား Profertil ကဘယ်လောက်ကြာအောင်သောက်ရလဲဆရာ မိန်းကလေးပါ အသက်က 27 ပါ
မေးနည်း ပို့ထားပြီး။ အမျိုးသမီးနဲ့ အသက်သိရ။ ရာသီနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မသိရ။ ဆေးကို စမ်းသပ်ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တာ သင့်။
ဆရာရေ လူတိုင်းက ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး သိချင်လွန်းလို့ သူ တတ်သလောက်လေး ရေးပြီး မေးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် နားလည်ပေးလိုက်ပါ ဒီလောက်ထိ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ တမင်ရေးတာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ မှန်ကန်အာင်မရေးနိုင်တာပဲဖြစ်မှာပါ
ဟုတ်တယ်၊ မှန်အောင်မရေးတတ်သူတွေက များတယ်။ ကွန်မင့်ကနေရေးကြတဲ့ ဆင်ခြေတွေထဲမှာ အလွယ်ရေးလို့ လို့က များတယ်။ မြန်မာစာ ဘာကြောင့်မှားရသနည်း ၁၀ ချက်ရေးတင်ပြထားတယ်။ ဘွဲ့မရသူ အတော်ကို ရှားပါးတဲ့ခေတ်မှာ အတန်းပညာကြောင့်ဆိုတာ နည်းနည်းသာမှန်တယ်။
ဘွဲ့ရပညာတတ်အသုံးက အတော်ဟောင်းနေပြီ။ အဲလိုသုံးခဲ့ကြတဲ့ခေတ်မှာ မြန်မာစာကို မှန်အောင်ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရခါစ ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ပေါ်ခဲ့တာ။ လက်ဝဲစာပေလည်းထွန်းကားချိန်က ပိုက်ဆံချမ်းသာသူတွေရဲ့ ဖေါက်ပြန်မှုတွေကို ထောက်ပြခဲ့တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ရောက်တော့ ပညာတတ်တွေကို နှိမ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအထိ မြန်မာစာမှန်အောင်ရေးကြတယ်။ စစ်အစိုးရ ဒုတိယမျိုးဆက်ကစပြီး သတ်ပုံကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ရာကနေ ကနေ့အထိ သတ်ပုံတွေကို မှားစေထားတယ်။
စုမိ ဆောင်းမိ ရှိပေမယ့်
ကျင်လည်နေ စာအုပ်ကြီးအတိုင်း ဘဝမို့ အိုး။
ခေတ်သီချင်းတချို့က သတ်ပုံမှန်တယ်။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။
အခုခေတ်မှာ ဘွဲ့ပေးသူတွေက သတ်ပုံမှားတယ်။
လေးစားစွာဖြင့်။ မရှင်းလို့ပါဆရာခင်ဗျ ကျနော် ကျမ လို့ရေးတာလား ကျွန်တော် ကျွန်မ လို့ရေးရမှာလား စားပွဲ လို့ ရေးရမှာလား စာပွဲ လို့ရေးရမှာလား အမှန်ကိုသိချင်လို့ပါခင်ဗျ။
ကျွန်တော်၊ ကျနော်၊ ကျမစာတွေ ၄-၅ ခါတင်ထားတယ်။ အခုတော့ စားပွဲလို့သာရေးကြတယ်။ အရင်က စားတာနဲ့ စာရေးတာခွဲပြီး ရေးခဲ့ကြတယ်။
I, Me, Mine, Myself ကျွန်တော် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/i-me-mine-myself.html
I say …သပြေခက်တို့ခေတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/i-say.html
Pronoun နာမ်စား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/04/pronoun.html
You သင် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/you.html
ဟောဒီမှာ ကွိ ဘာသာပြန်ခင်ဗျ
ကျမအလုပ်ခန်းထဲသို့ စာရေးဆရာမြသန်းတင့်သည် ကွိ ဘာသာပြန်စာမူကြီးကို ပိုက်ဝင်လာကာ ကျမစာပွဲပေါ်၌ ပုံချရင်း ပြောလိုက်သည်။ ကျမမှာ စာမူထပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်၊ မြသန်းတင့်၏ မျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်ဖြင့် တဒင်္ဂ အသက်ရှူမှားလောက်အောင် ကြက်သေ သေနေသည်။
ကိုဝင်းတင် ဘာသာပြန်ထားတယ်။ ဒေါ်မမလေး အမှာရေးပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။
ကျမ ကြာရှည် ကြက်သေသေမနေစေရန် သူကဆက်ပြောပြသည်။ ကိုဝင်းတင်ဟု သူပြောလိုက်မှပင် ကြက်သေ သေနေသော အရှိန်တို့သည် တစတစ ပြေ၍ သွားသည်။
ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ကွိ ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို ၁၉၇၅ ခု မတ်လမှာ ပထမအကြိမ်ထုတ်ပါတယ်။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မြသန်းတင့်တို့အားလုံးက သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးခဲ့ကြတယ်။ ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေ ကဗျာဆရာတွေက တစ်ဒင်္ဂလို့ ရေးကြတယ်။ တစ်စတစ်စလို့ ရေးကြတယ်။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးအရွယ်ရှိ ခုခေတ်အမျိုးသမီးတွေက သမီးအလုပ်ခန်းထဲသို့လို့ ရေးကြမယ်။
တနေ့သ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် အရိယမည်သော ငါးမျှားသမား၏ ဥပနိဿယကို မြင်တော်မူ၍ သာဝတ္ထိမြိ့၏ မြောက်တံခါးအနီးရွာ၌ ဆွမ်းခံပြီးလျှင် ရဟန်းသံဃာနှင့်တကွ ပြန်ကြွလာတော်မူလေ၏။
ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားစီရင်တော်မူသည်
သာသနာ ၂၅၄၁၊ ကောဇာ ၁၂၅၉၊ ခရစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ထုတ်
တနေ့သ၌ နဲ့ နှင့်တကွသတ်ပုံတွေကို တင်ပြပါတယ်။ မဟာစည်ဆရာတော်ထက် စာတော်သူတွေခေတ်မှာတော့ အဲလိုမရေးကြပါ။
Hi ကူးစက်ရောဂါအောက်မှာ ဥပေက္ခာရှေ့ထားမှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာ တဲ့။
ဥပေက္ခာစကားလုံးက အဓိပ္ပါယ်လေးနက်တယ်။ လွယ်လွယ်လေးသာ ပြောပါရစေ။
ကျွန်တော်က ကိုယ့်နေရာလေးမှာ နေ့တိုင်း အမှိုက်ရှင်းတယ်။ အမှိုက်ဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် မတူပါ။ အသုံးမကျတာ မမြင်ချင်တာကို အမှိုက်လို့ယူဆတယ်။ တချို့လူတွေအတွက်တော့ ဧည့်ခန်းနဲ့ အိမ်ဦးခန်းမှာထားတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်။ ကန်တော့။ ဆောရီး။
ကျွန်တော်က အကောင်ပုံတွေကို မနှစ်သက်ပါ။ အင်တာနက်လမ်းပေါ်က ကောက်ရတာတိုင်းကို မကြိုက်ပါ။ လိုချင်တာဆိုရင်တော့ ဂူဂယ်လ်ဆာ့ခ်ျမှာ မရ ရအောင် လိုက်ရှာတယ်။ ကြိုက်စကားလုံးနဲ့ ပါးစပ်ကြီး ဖြဲပြနေတဲ့ပုံ အစားမထိုးပါ။
လက်အုပ်ချီတဲ့ပုံကို တကယ်ဟုတ်တယ် မထင်ပါ။ ဆရာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ ဟိုင်း တန်ဖိုးတူ မထားနိုင်ပါ။
ကိုယ့်နေရာလေးမှာ အမြဲတမ်း အမှိုက်ရှင်းပါတယ်။
၁။ ဆရာ ၎င်းရဲ့ စာလုံးဟာ ငသတ်ရှေ့က အက္ခရာကို ဘယ်လိုခေါ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။ ၎င်း လည်းကောင်း ဆက်စပ်ရာ ပြပုဒ်တွေဟာ ဝါကျအထားအသို မတူကြဘူးဆရာ။ သတင်းစာတွေမှာတော့ ၎င်းကို ဝါကျအစမှာသုံးတယ်၊ လည်းကောင်းကိုတော့ ဝါကျနောက် ဆက်စပ်ရာနေရာမှာသုံးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာတင်ထားတဲ့ အကြွေစိလေးမှာ တပြားကို ၁ါးလို့ ရေးထားတာ အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဂဏာန်း သင်္ချာနဲ့ အက္ခရာကို တွဲရေးထားတယ်။ နောက် ဥပမာတခုက လည်းကောင်းကို ၎င်းလို့လည်းရေးတယ်နော်ဆရာ။ အဲလို အရေးအသားပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ ခင်ဗျ။
၃။ ၄င်း သည် ဘယ် စာလုံးကိုယူတာလည်းဆရာ ဗျည်း ၃၃လုံးထဲကဘယ်အလုံးလည်းဆရာ
အရင်က ကသတ်ကိုလည်း သေးသေးတင်နဲ့ရေးတယ်။ ဥပမာ မြောက် ကို မြောံ။ ၎င်း ဆိုတာ ထို၊ ယင်း၊ အနှီ၊ ဤ၊ နည်းတူ ဖြစ်တယ်။ လည်းကောင်းအစားသုံးလို့ မရတာတွေရှိတယ်။ ၎င်းအရာ၊ ၎င်းကိစ္စ၊ ၎င်းမင်းသမီး၊ ၎င်းဇာတ်ကား စသည်။ ၄င်း မဟုတ်ပါ။
လည်းကောင်း၊ သော်လည်းကောင်း နဲ့ ၎င်း ကတော့ မတူပါ။ တချို့က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ရောရေးနေကြတယ်။
ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မင်းသားအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်သည်။ ကာရာသည် မော်ဒယ်အဖြစ်လည်းကောင်း ရုပ်ရှင်းသမီးအဖြစ်လည်းကောင်း နာမည်ကြီးသည်။
ဆေးအတတ်သည်လည်းကောင်း၊ သဒ္ဒါကျမ်းအတတ်သည်လည်းကောင်း၊ နီတိကျမ်းအတတ်သည် လည်းကောင်း သင်ယူအပ်၏။ ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်းလည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင်လည်းကောင်း အရေးကြီးပါသည်။
၎င်းဖေ့စ်ဘွတ်သုံးသူတို့သည် စာရေးသားရာတွင်လည်းကောင်း၊ စကားပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်း မှားယွင်း လွဲချော်နေကြပေသည်။ ဆောရီး။
သီးခြားစာလုံးဖြစ်။ င တချောင်းငင်လည်း မဟုတ်။ ဟထိုးလည်း မဟုတ်။ ဂဏန်း ၄ ကနေဆင်းသက်လာ။ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်မှာတော့ ထွင်ပေးထား။ အဲတာက နောက်ပေါက်။ ၄င်း (၎င်း) ရော လည်းကောင်းပါ သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးနိုင်လို့ထင်ပါတယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်ထုတ် ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးသားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းမြန်မာရာဇဝင်စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၁။ ၎င်းပျူဟူသော အမည် ပါရှိနေသေးသဖြင့်
အထက်စာကြောင်းအတိုင်းတူနေတာကို ၎င်းလို့သာရေးလေ့ရှိကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Ditto (do) အထက်ပါအတိုင်းနဲ့ တူတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ထိုနည်းလည်းကောင်း စီးပွါးရေးအခြေအနေကောင်းလို့ ကျန်းမာစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါသည် (ရွှေမန်းတင်မောင်)။
Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး
၁။ သမီးသူငယ်ချင်းက အသက် ၃၁နှစ်ပါ။အိမ်ထောင်မပြုရသေးပါဘူး။ ရာသီပုံမှန်မလာတာကစပြီးစစ်ကြည့်မိတော့ CIN 1 သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအဆင့် ၁ လို့ ဆရာဝန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ ခုချိန်မှကာကွယ်ဆေးထိုလို့ရပါသေးလားဆရာ။ သာအိမ်တွေဘာတွေထုတ်တဲ့အထိဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။ အဆင့်၁ ဆိုတော့ ဘယ်လို treatment တွေနဲ့ ကုသရမှာလဲ သိချင်လို့ပါဆရာ။
၂။ ကျမအသက် ၄ဝ နှစ်ပါ။ သားသမီး၂ယောက်ရှိပါတယ်။ အသက် ၃ဝ မှာသားကြောဖြတ်ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်က ဆေးစစ်တဲ့အနေနဲ့ Pap Test စစ်ကြည့်ပါတယ်။ အဖြေက CIN1 to CIN2 and actue Inflammatory cervical smear ဖြစ်နေပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းရောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်က သားအိမ်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်။ မထုတ်ရင် ၆ လကြာရင်ပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုးသတ်ဆေး ၂ ကတ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၆လကြာတော့ သေချာရအောင် Pap Test/ Colposcopy ကိရိယာနဲ့ကြည့်ပြီး Biopsy အသားစယူပြီးစစ်ပါတယ်။ Pap Test = Inflammatory smear; Pap Biopsy = Chronic papillary cervicitis with CIN1 ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်မက ဆေးသောက်ဖို့မလိုဘူးပြောတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခိုင်းပြီး ၆လ ကြာရင်ပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာက ကြိုသိရင် ဆေးစားပြီး ပျောက်အောင်ကုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အခုကျမကိုဘာဆေးမှ မစားခိုင်းဘူးပါဘူး။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆရာ အကြံဥာဏ်လေးလိုချင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သားအိမ်ထုတ်ဖို့လိုပါသလားဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၃။ ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီး (၃၉ နှစ်) သည် ပြီးခဲ့သော September လဆန်းပိုင်းက၊ မြန်မာပြည်တွင် Ultrasound, Biopsy, CT scan, Pep smear Test ပြုလုပ်ခဲ့ရာ သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ (CIN 1, HPV Infection) ဟု အဖြေ ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ဘန်ကောက်မြို့N-Health ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့ ပြီး Thin Prep Test စစ်ဆေးရာတွင်လည်း Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy. Mild inflammation. Reactive epithelial cellular changes. Partially obscuring blood. ဟု အဖြေထွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ပြသလျှက်ရှိသော OG မှ မြန်မာအခေါ် မီးရှို့လျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း ပြောပါသည်။ အဖြေကို ပိုမိုသေချာစေရန် September 23 ရက်တွင် Bangkok Hospital ရှိ OG နှင့် ထပ်မံသွားရောက် ပြသရာတွင် စိုးရိမ်စရာ မလိုကြောင်း နောက် လေးလ ကြာမှ နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန် လိုကြောင်းသာ ပြောပါသည်။ မီးရှို့ ကုသခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိလိုပါသည်။ မြန်မာပြည်မှ OG အများစုသည် ယခုအခြေအနေ (CIN 1) သည် မီးရှို့ကုသခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။ Bangkok Hospital ရှိ OG အား သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ပြောကြည့်ရာ တလင် တမယား နေပါက ထိုးရန်မလိုဟုသာ တွင်တွင်ပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်နှင့် ကွာခြားသောအချက်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် မည်သူ့ကိုမဆို တိုက်တွန်းပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်း၏ အကျိူးအပြစ်များကို ရှင်းလင်းစွာ သိလိုပါသည်။ ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ အားလုံးကိုလည်း သိလိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် တယောက်နှင့်တယောက် သစ္စာရှိသော အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် CIN 1, HPV Infection ဖြစ်ရပါသလဲ။ တစ်ခုပြောစရာရှိသည်မှာ ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီးသည် ၃ ကြိမ် သားလျှောခဲ့သဖြင့် အပြင်ဆေးခန်းတွင် ၂ ကြိမ် နှင့် ဗဟိုအမျိုးသမီး ဆေးရုံကြီးတွင် ၁ ကြိမ် D&C လုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
Cervical interstitial neoplasia (CIN) ရောဂါကို Cervical dysplasia လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Potentially premalignant transformation ကင်ဆာ မတိုင်မီအဆင့်ကို ပြောင်းသွားနိုင်ချေ ရှိတယ်။ ဆေးမကုဘဲလဲ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းဟာ Cervical cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Cervical squamous cell carcinoma (SCC) လို့ ခေါ်မယ်။ ဒါကလဲ ကိုယ်ခံအားနဲ့ မပျောက်၊ ဆေးလဲ မကုမှသာ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာ အမျိုးသမီး ၂ သိန်းခွဲကနေ ၁ သန်းမှာ ၁ ယောက် CIN ဖြစ်နေတာ နှစ်တိုင်းတွေ့ရတယ်။ အသက် ၂၅ ကနေ ၃၅ ကြားမှာ အဖြစ်များတယ်။
HPV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ပြီး သားအိမ်ဝမှာ နာတာရှည် ရောင်တာကနေ ဖြစ်တယ်။ HPV အမျိုးအစား ရာကျော်ထဲက တဒါဇင်ကနေ၊ အဲဒီထဲက HPV 16, 18, 31, or 45 ကနေ အဖြစ်များတယ်။ ကျန်တဲ့ အမျိုးအစားတွေက ကြွက်နို့ ဖြစ်စေတယ်။
အိမ်ထောင်ဘက် ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားဖေါ် များသူတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ၊ ကိုယ်ခံအား နည်းသူတွေ၊ ငယ်ငယ်နဲ့ ကလေး မွေးသူတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ဖြစ်စမှာ ဘာမှ မခံစားရဘူး။ Pap smear စမ်းသပ်နည်းနဲ့ သိလာရတယ်။ Papanicolaou test, Pap test, Cervical smear, Smear test လို့ အမျိုးမျိုး ခေါ်တယ်။ Vagina မွေးလမ်းကြောင်း ထဲကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Speculum ကရိယာ ထည့်မယ်။ Endocervical brush ကို အဝထဲထည့်ပြီးလှည့်၊ သားအိမ်ဝ အပြင်ပေါက်အနားက (ဆဲလ်) တွေကို Aylesbury spatula ဆိုတာလေးနဲ့ယူ၊ မှန်ပြားလေးပေါ် တင်ပြီး၊ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။
Cervical dysplasia ကို Pap smear လုပ်တော့ Squamous intraepithelial lesion (SIL) ဆိုတာနဲ့ အဆင့်ခွဲတယ်။
- Low-grade (LSIL) အဆင့်နိမ့်၊
- High-grade (HSIL) အဆင့်တက် နဲ့
- Possibly cancerous (Malignant) ကင်ဆာဖြစ်လုနီးလို့ သတ်မှတ်တယ်။
Pap smear မှာ အဲလို မူမှန်မဟုတ်တာ ပြနေရင် ဆက်လုပ်စရာတွေ လိုမယ်။
၁။ Follow-up Pap smears သာမန်အဆင့်ကို နောက်တခါ ခေါ်စစ်မယ်။
၂။ Colposcopy-directed biopsy နည်းနဲ့ အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးမယ်။
၃။ Cone biopsy may be done after colposcopy နည်းနဲ့ လိုအပ်ရင် အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးမယ်။
Biopsy အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးလို့ Dysplasia တွေ့ရရင် Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) ခေါ်တယ်။ အဆင့်ခွဲရင် -
CIN I = Mild dysplasia အဆင့် (၁)၊
CIN II = Moderate to marked dysplasia အဆင့် (၂) နဲ့
CIN III = Severe dysplasia to carcinoma in situ အဆင့် (၃) ရှိတယ်။
Mild dysplasia (LSIL or CIN I) သာမန်အဆင့်တွေကို ၃-၆ လကြာရင် ထပ်စစ်ဘို့ သင့်တယ်။ မပျောက်သေးတာ တွေ့လာရင် ဆေးကုဘို့ လိုမယ်။ Higher grade CIN အဆင့်ကို Removal or destruction of the neoplastic cervical cells ကင်ဆာ (ကလပ်စည်း) တွေကို ဖျက်ဆီး ထုတ်ပြစ်နည်းတွေ လုပ်ရမယ်။
၁။ Cryocautery အေးခဲနည်းသုံးခြင်း၊
၂။ Electrocautery လျှပ်စစ်မီးရှို့ခြင်း၊
၃။ Laser cautery လေဆာနည်း၊
၄။ Loop electrical excision procedure (LEEP) လျှပ်စစ်သုံး ဖြတ်ထုတ်ခြင်း နဲ့
၅။ Cervical conization နည်းတွေ ရှိတယ်။
၆။ Therapeutic vaccines ကာကွယ်ဆေးသုံး ကုသနည်းလဲ ရှိနေပြီ။
အများစုက သူ့ဖါသူပျောက်တယ်။ ဆေးမကုသဘဲ CIN-1 ထဲက ၇ဝ-၉ဝ% ဟာ ၂ နှစ်အတွင်း ပျောက်သွားမယ်။ CIN2ထဲက ၅ဝ% ဟာ ၂ နှစ်အတွင်း ပျောက်သွားမယ်။ ပျောက်သွားသူလဲ ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ကင်ဆာ ပြောင်းဘို့ ဆိုတာ ၃-၄ဝ နှစ်၊ ပျမ်းမျှ ၁၅ နှစ် ကြာတယ်။ ၂ဝ% ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆချက်တခု ရှိတယ်။ စောစောသိလို့ ဆေးကုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ အားလုံးလောက်နီးနီး ကောင်းတယ်။
တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနည်းတာ၊ အစာအာဟာရမပြည့်စုံတာ၊ ယောက်ျားဖေါ် များများထားတာ၊ စီးကရက် သောက်တာတွေကြောင့် ကင်ဆာအဆင့်ကို ပိုရောက်စေနိုင်တယ်။
မိန်းကလေးတိုင်း ၉ သမီးကတည်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ သားအိမ်ကင်ဆာကို ၇ဝ% ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ၂၆ နှစ်ကျော်သူ ကာကွယ်ဆေး မလိုတော့ပါ။
နူတ် နုတ် နုပ် နှပ်
ဖုဿတီမိဖုရားကြီး နတ်သမီးဘဝက သိကြာမင်းထံတောင်းသော ဆ...
နွေဂိမှာန်ခါသာစွပေမို့ လွမ်းစရာ့ လရာသီ ရွှေပြည်နှင်...
ပဋိသန္ဓာရ သာရဏီယ စကား
ဘာကိုမှ ရရစ်မထည့်တဲ့ခေတ် ရောက်လာနိုင်တယ်
Meclizine 25 mg ဆေး
Quack စေတနာမှာ ပညာမပါရင် ဒုက္ခပေးတယ်
အမှားရှောင်တတ်ရင် မြန်မာစာအစစ်ကို တွေ့ပါမယ်
Ta Ta တာ့တာ
ခေတ်ရေစီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဖြင့် သံ...
မြန်မာစာ အဘယ်ကြောင့် မှားနေကြသနည်း
ကင်းဝန်မင်းကြီး ရေးသားခဲ့တဲ့ နေမိရကန်
Typhoid fever တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ
Welcome Spring ဟိုဘက်အိမ်
Pregnancy အသက်ဘယ်လောက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သင့်လဲ
Collateral Damage နောက်ဆက်တွဲတွေက များတယ်
သိပ္ပံမောင်ဝသည် သိပ္ပံဦးဝ မဟုတ်
သူလျှို ဓါးပြ အညမည
သတ်ပုံစာ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းသလဲ မသိပါ
Baby Question ကလေးအတွက် မေးခွန်း